ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): အကြင်နာတွေနဲ့ဖေးကူပါ ( လေးဖြူ ၊ ဟယ်ရီလင်း ၊ မျိုးကြီး ၊ ဆုန်သင်းပါရ်)
အကြင်နာတွေနဲ့ဖေးကူပါ ( လေးဖြူ ၊ ဟယ်ရီလင်း ၊ မျိုးကြီး ၊ ဆုန်သင်းပါရ်)
ဤ သီချင်းသည် အကြမ်းထည်ပဲသွင်းရသေးပြီး စိစစ်ရေးကို မတင်ရသေးသောကြောင့် တစ်စုံတစ်ရာပြဿနာများကို ကာကွယ်သည့်အနေဖြင့် Public သို့ မဖြန့်ချီရသေးခင် ကာလအတွင်း အိုင်စီမှ တောင်းဆိုမှုဖြင့် ခေတ္တခဏပြန်လည်ဖြုတ်သိမ်းထားလိုက်ပါသည်။
Posted by လင်းလက်ကြယ်စင် at 2:52 PM
ဒေါင်းလုဒ် လုပ်မရဘူးဗျ။ 88% မှာ ရပ်သွားတယ်. နောက်တစ်ခါ ဒေါင်း တော့လည်း အဲလိုပဲ. အပြည့်မရဘူးဖြစ်နေတယ်။
သီချင်းနားထောင်ရင်း သဘောကျလို့ ဒေါင်းလုပ်လည်း လုပ်သွားတယ်။ သီချင်းစာသားလည်း ကူးသွားတယ်။
ကိုမှော်ဆရာရှင် ကျွန်မပို့စ်ထဲမှာ Download From Fileden ဆိုပြီး လင့်ခ်အသစ်တစ်ခု ထပ်မံချိတ်ပေးထားပါတယ်။ ဒေါင်းလော့ခ်ဆွဲယူဖို့ အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျေးဇူး။
ရသွားပြီဗျို့.. ရှယ်ပေးလို့ ကျေးဇူးပါဗျာ။ :)
အကြင်နာတွေနဲ့ဖေးကူပါ ( လေးဖြူ ၊ ဟယ်ရီလင်း ၊ မျိုြး...
စင်္ကာပူမှ ပြည်ပရောက်မျိုးချစ်မြန်မာများ၏ ကော့မှုး၊ က...
( UN JOBs Vacancies in Myanmar ) မြန်မာအလုပ်သမားမျ...
ပြည်သူ့အသက်တွေ အလျော်ပြန်ပေး (ရဲရင့်သက်ဇွဲ)
ပြည်ပရောက်မျိုးချစ်မြန်မာများအဖွဲ့ (စင်္ကာပူ)မှ ဒေးဒ...
ပြည်ပရောက်မျိုးချစ်မြန်မာများအဖွဲ့ (စင်္ကာပူ)မှ မုန်...
China Earthquake Vs Myanmar Cyclone
ဒေးဒရဲမြို့နှင့် ရွာစွန်ရွာဖျားများရှိ မုန်တိုင်းဒ...
သေဆုံးသွားသူ ကျန်ရစ်သူများအတွက် ဆုတောင်းဖို့ရာ ခွင...
မြန်မာပြည်ရှိ မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်များအတွက် အရေးပေါ်လိ...
ရန်ကုန်တိုင်းရှိ မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်များအား အစားအသော...
မေလ ၁၇ ရက် - စင်္ကာပူနိုင်ငံ မြန်မာသံရုံးရှေ့ ဖယောင်...
ပြန်မလာနဲ့တော့ မုန်တိုင်းရေ ( ရဲရင့်သက်ဇွဲ )
အာဏာရှင်တုန်လှုပ်သော ၂၀၀၈ တဘောင်
မုန်တိုင်း .. ဒုက္ခ .. သောက နှင့် နာကြဉ်းချက်များ
စင်္ကာပူရှိ မျိုးချစ်မြန်မာများအဖွဲ့မှ အလှူငွေများကု...
ဒုက္ခသည် အမှတ် တစ်သန်းခြောက်သောင်း
စိတ်ထိခိုက်ကြေကွဲရင်နာဖွယ် မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် သေ...
၁၀-၅-၂၀၀၈ အထိ စင်္ကာပူတွင် စုစုပေါင်းရရှိသော အလှူငွေ...
လူထုဆန္ဒခံယူပွဲကိစ္စနှင့် မုန်တိုင်းဘေးအတွက် အကူညီပေ...
၉-၅-၂၀၀၈ အထိ စင်္ကာပူတွင် စုစုပေါင်းရရှိသော အလှူငွေ
နာဂစ်စ်မုန်တိုင်းကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေသော မြန်မာပြည်...
၈-၅-၂၀၀၈ အထိ စင်္ကာပူတွင် စုစုပေါင်းရရှိသော အလှူငွေ ...
ဒုက္ခ သောက .. မုန်တိုင်း
စင်္ကာပူက ငွေပြန်ပို့ နာရေးအသင်းကြီးမှ "ဆန်" ဝေဖို့
၆-၅-၂၀၀၈ အထိ စင်္ကာပူတွင် စုစုပေါင်းရရှိသော အလှူငွေ
၅-၅-၂၀၀၈ အထိ စင်္ကာပူတွင် စုစုပေါင်းရရှိသော အလှူငွေ
Myanmar death toll 'could reach 10,000'
နာဂစ်(Nargis)မုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေသောြ...
"ကန့်ကွက်သူ မ၀င်ရ" နှင့် ဒုတိယအကြိမ် သက်တမ်းတိုြး...